Posted by မင်္ဂလာပါ .... at 2:34 AM
အစ်မရေ.. စာလေးဖတ်မိတော့ အစ်မတစ်ယောက်လို ကိုယ်ချင်းစာမိပါတယ်.. ရောက်တဲ့နေရာမှာ ရတနာသုံးပါးကို မမေ့မလျော့ပဲ ဘ၀တက်လမ်းကို လျောက်လှမ်းနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်..။ စကားတစ်ခုလက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါတယ်..။
လောကရေးလည်း မဖျင်းနဲ့ ဓမ္မရေးလည်း မကင်းစေနဲ့(ဓမ္မဘေရီဆရာတော်) ဆိုတဲ့ ဆရာတော်ရဲ့ အဆုံးအမစကားလေးပါ။ နာယူကျင့်ကြံနိုင်ပါစေ...။
အပေါ်က ကိုညီရေးထားတာလေးကလဲ အရမ်းကောင်းပါတယ်။
ဘ၀ဆိုတာဒီလိုပါပဲ ညီမလေးရယ်.. ရုန်းကန်လှုတ်ရှား
နေရတဲ့သူတွေကြီးပါပဲ။ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း ရုန်းကန်လှုတ်ရှားနေရတာမဟုတ်ဖူးနော်..စိတ်ဓါတ်မကျနဲ့ဦး။ အခု သူဌေးကြီးတွေ ဖြစ်နေတဲ့သူ
တွေကလည်း အရင်ကသူတို့ရုန်းကန်ပြီး ကြိုးစားခဲ့ကြ
လို့ ဒီဘ၀ရောက်လာကြတာ များပါတယ်။
မိဘက ချမ်းသာတဲ့သူမို့ ရုန်းကန်လှုတ်ရှားစရာမလိုပါပဲ သူဌေးသူကြွယ်တွေ ဖြစ်နေကြတဲ့သူတွေလည်း ရှိနေကြ
များသောအားဖြင့် မမတို့တွေအားလုံးဟာ ဘ၀တူတွေပါ
ရတာပါပဲ။ အားမလျှော့နဲ့နော်.. ငါလည်း တချိန်မှာ သူဌေးမကြီးဖြစ်ရမယ်လို့ စိတ်ထဲမှာတွေးထား။
ညီမလေးက လိမ္မာပြီးသားပဲကို ဘာသာရေးလည်း မမေ့
မလျှော့တတ်တဲ့သူ တစ်ယောက်မို့ ညီမလေးရဲ့ ဘ၀ရှေ့
ရေးလှပ ပျော်ရွှင်နိုင်မှာ သေခြာပါတယ် နှင်းရေ။
Aja Aja ...ဖိုက်တင်!!!!!!!!!!!!
Ma Ma War.
မြန်မာအမျိုးသမီးလေးတစ်ယာက်အနေနဲ့ တိုင်းတစ်ပါးမှာ တစ်ကိုယ်တည်းရပ်တည်နေရတာကို ခံစားနားလည်မိပါတယ်ဗျာ..။ စာလေးတွေကို လိုက်ဖတ်ရင်း... ကျွန်တော်တောင်မောလာမိသလိုပါပဲဗျာ...။
အပေါ်မှာ မလေးတို့၊ အစ်မ၀ါတို့ အားပေးသွားသလိုပါပဲနော်...။ အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါစေဗျာ...။ (ဒါပဲဆုတောင်းပေးတတ်တာဗျ...:D...)
အခက်အခဲတွေ ရှိပေမယ့် ကိုယ့်ဘဝကိုယ် ရပ်တည်နေနိုင်တဲ့ သူတွေကို အားကျပါတယ်.. သူငယ်ချင်းတွေ တော်တော်များများလည်း အဲဒီမှာ ရောက်နေကြတယ်..
ကိုယ်ကတော့ ဒီမှာကျန်နေပြီး မိဘကို အားကိုးနေရလို့ မှားခဲ့တယ်လို့ အမြဲခံစားရပါတယ်..
အားတင်းထားပါ .. နှင်းဟေမာ...
သူငယ်ချင်းနှင်းဟေမာရေ... ဘ၀ လေးကို ဖတ်သွားပါတယ် ။ ကော်ဖီလည်း မကြိုက်ဖူးနော်. ဟီး ကောင်းတယ် .. ။ တနယ်တဝေးမှာ ခလုတ်မထိဆူးမညိပါစေနဲ့..သူငယ်ချင်း
ဒီကျွန်းနိုင်ငံလေးကနေ ပိုပြီး ရေရာခိုင်မာတဲ့ နိုင်ငံကြီးတစ်ခုကို လာခဲ့ဖို့ မိတ်ဆွေတွေက ကမ်းလှမ်းတဲ့အခါ
သားစလုံးမှာ ဘယ်လောက်ကြာကြာ နေပြီးရင် ပြန်လာမှာလဲဆိုတဲ့ မိဘတွေ စကားကို ပြန်ပြန်ကြားနေမိတယ် ။
ဘယ်လိုပဲ ပြဿနာတွေရှိရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံလေးကိုပဲ ဘယ်တော့ပြန်ဖြစ်မလဲဆိုတာ အမြဲ ခေါင်းထဲမှာရှိတယ် ။
“အမျိုး ဘာသာ သာသနာကို စောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့ သစ်ပင်တစ်ပင်ပဲ ဖြစ်ချင်တယ်”
လောလောဆယ်တော့ site ထဲ မှာ ချွေးတလုံးလုံးနဲ့ လူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့ ပြေးပြေးလွှားလွှားပေါ့ ။
PS အချိန်ရရင် မနှင်းတို့ရွာ ဆက်ရေးပါဦး..။
ဟုတ်ပါတယ် နှင်းရေ..တိုင်းတစ်ပါးမှာ ဒီလိုပဲ ပြင်းစရာ ကောင်းပါတယ်..သွားစရာ နေရာရှိတော့ဘူး..။
ကြိုးစားမှု့ တိုင်းမှာ အရာထင်ပါတယ်.။ ခုတ်ချက် တိုင်းမှာ အရာမထင်တောင် ခုတ်ရာများရင် အရာထင်လာမှာပဲလို့ ယုံကြည်ရင်းနဲ့ ဆက်လျှောက်ရမဲ့ ခရီးမှာ အားသစ်မွေးဖွါးနိုင်ပါစေ.။
လေးလံမွန်းကျပ်တဲ့စိတ်တွေ ထွက်ပေါက်လေးရပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးနေမယ်နော်။ ကြိုးစားခွင့် ရှိတုန်း ကြိုးစားပါ။ အခွင့်အရေးဆိုတာ နှစ်ခါမလာဘူးဆိုတဲ့ စကားပုံလည်း ရှိတာပဲ။ အင်္ဂလိပ်စကားပုံပေမယ့် ဘိုလို မရေးတတ်လို့ ဟီးဟီး။ နောင်တဆိုတာ ပူလောင်လွန်းလှမှန်း ကိုယ်တွေ့မို့ သိခဲ့ရတာပါ။ ကြိုးစားပါ နှင်းရေ ...
ညီမလေးရေ.. ကြိုးစားနေတဲ့ညီမလေးရဲ့ ပုံရိပ်လေးကို မြင်ယောင်ရင်း အရမ်းကိုချစ်မိတယ်။ အခက်အခဲဆိုတာကို “ကိုယ့်ရဲ့ခံနိုင်ရည်စွမ်းအားကို အားစမ်းနေကြတဲ့ ပြိုင်ဘက်တွေ”အဖြစ်သဘောထားလိုက်ပါ..
ညီမလေးရေ..ခုလိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေကြတဲ့ သူတွေအားလုံးကိုကိုယ်ချင်းစာပါတယ်။ ညီမလေးလည်း
အတော်ပင်ပန်းတယ်နော်။ အဆင်ပြေပျော်ရွှင်ပါစေညီမ။ စကာင်္ပူရောက်မှ ညီမအိမ်မှာထမင်းလာစားတော့မယ်နော် ခုတော့ လေယဉ်ဖိုးဆုလိုက်အုံးမယ်း))
မလွယ်ပါ့လား ဟရို့တစ်နေ့ တာ အလုပ်တွေ နဲ့ကျနော်ဆို အသက်တောင် ဖြောင့်အောင် ရှူ နှိုင်ပါ့မလားမသိဘူး ..... မနှင်းရဲ့တစ်နေ့ တာ လေးကို စိတ်ဝင်တစားဖတ်သွားပါတယ်
မနက်လင်းကတည်းက ညမိုးချုပ်အထိ အလုပ်နဲ့လက် မပြတ်အောင် လုပ်နေရတာပါလားနော်။ မနက်အိပ်ယာထ ပျင်းတာတော့ ကိုမျိုးကိုမီမယ် မထင်ဘူး။ မနက်တိုင်း အလုပ်မသွားဘူးပဲ တွေးနေတာလေ။ အိပ်ယာထပျင်းတာ။ သံရုံးပေးရတဲ့ အခွန်ငွေကတော့ နှမြှောဆုံးဘဲ။ နှင်းရေ.. ဘာတွေပဲ အဆက်မပြတ်လုပ်နေရ..လုပ်နေရ... ကျန်းမာရေးကိုတော့ အထူးဂရုစိုက်ပါလို့....
ဘဝဆိုတာကတော့ ဒီလိုပဲ ဖြတ်သန်းကြရတာပဲလေ..
မပျော်ရွှင်တဲ့နေရာမှာပဲ ပျော်စရာလေးတွေရှာကြံပြီး ပျော်အောင်နေရတာမဟုတ်လား...
အစစအရာရာ အဆင်ပြေနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးနေမယ်...
ညီမလေးရေ စာဖတ်ပြီးတော့ မောသွားတယ် လို့မပြောတော့ပါဘူး။ ဘာကြောင့်ဆိုတော့ အားလုံးရဲ့ ရုန်းကန်ရမှု သိပ်မကွာကြဘူးလေ
ဒီလိုပဲ ရင်ထဲမှာ မွန်းကျပ်လာရင် စာလေးတွေ ရေးပြီးရင်ဖွင့်ပေါ့။ တယောက်ကို တယောက်အားပေးပြီး ရှေ့ဆက်ရမှာပဲ မဟုတ်လား။
(ဟိုနေ့ထဲက လာဖတ်ပြီးပြီ အချိန်မရလို့ ပြန်သွား ရတာ)
အပေါ်မှာ အားပေးတဲ့စကားတွေများနေပြီဆိုတော့ ဘာပြောရမှန်းတောင်မသိတော့ပါဘူး။ အဲဒီတော့ လိုရာပန်းတိုင်ကို အမြန်ဆုံးရောက်ရှိနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်ဗျာ.။
ညီမရဲ့ ရုန်းကန်ပြေးလွှား လှုပ်ရှားနေတဲ့နောက်ကို ညီမစာဖတ်ပီး မြင်ယောင်မိတယ်။ အားလဲကျတယ်။ အမလဲ အဲလို လုပ်ချင်ခဲ့တယ်။ တကယ်ပြောတာပါ။ လုပ်ကြည့်ချင်ခဲ့တာပါ။
ညီမကတော်လိုက်တာ။ ဘ၀ဆိုတာ ဒီလိုပဲပြေးလွှားနေရတာတဲ့ ညီမရဲ့။
စာထဲကအတိုင်းပြောလို့ ညီမ စိတ်မဆိုးလောက်ဘူးထင်ပါတယ်။
အမလဲ ညီမတို့လို ရုန်းကန်ကြည့်ချင်တယ်။ ဒါကလဲ ဘ၀ပေးကံအရ တယောက်နဲ့တယောက်မှမတူတာပဲနော်။ ညီမရေ... လူတိုင်းလူတိုင်းမှာတော့ မတူညီတဲ့ ဘ၀ပေးတွေနဲ့အတူ ကြိုးစားအားထုတ်ရတာခြင်းတော့ ဘယ်တူနိုင်ပါ့မလဲ..နော်။ အမလဲ အမအလျောက်တော့ ကြိုးစားရတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ အမကတော့လေ ညီမတို့လို ကိုယ့်ထူးကိုယ်ချွန်ပီး ကြိုးစားနေရတဲ့သူတွေကို ပိုအားကျတယ်။ ကိုယ့်ကိုတောင် အဆင်သင့်လေးရဖို့ အမြဲကြိုးစားအားထုတ်နေခဲ့တာထက် ညီမတို့လို ကျောင်းတဖက် အလုပ်တဖက်နဲ့ ထူးချွန်အောင် ကြိုးစားနေတဲ့သူတွေကို မမှီဘူးထင်တာပဲ ညီမရေ..။
အားကျလိုက်တာနော်။ ညီမရဲ့ ကြိုးစားမှုကို မြင်ရတော့ ၀မ်းလဲသာတယ်။ အားလဲကျတယ်။ ညီမလိုမျိုး လူတော်တွေ မြန်မာပြည်မှာ အများကြီးရှိနေဦးမှာပါ။ ဂုဏ်ယူပါတယ်..ညီမရေ။ ကြိုးစားတဲ့အတွက် ရလဒ်ကောင်းမှာပါ..ညီမရေ..
ကောင်းတယ်ဟာ ငါ့လိုပဲ အဲဦးထုတ်ကြီးနဲ့ပေါ့ (ငါတော့ဆောင်းရတော့ဘူး ခွိခွိ)
တိုက်တာအဆောက်အအုံတွေမပြောနဲ့ ဆောက်ပြီးသားအဆင်သင့်အဆောက်အဦ်ထဲသွားပြီး Quantity သွားစစ်တာတောင် တော်တော်မောလှပါတယ်
တချိန်ချိန်မှာတော့ ညီမရဲ့ ကြိုးစားမှုကြောင့် ဒီဘ၀ တိုက်ပွဲမှာ အနိုင်ရလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
အောင်မြင်စွာနဲ့ ဘ၀ခရီးလမ်းကို ဆက်လက်လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေ။